Jawaab ku Saabsan Qoraal ku Soo Baxay Bogga Beenta ee Qorahey.com – Rasaasa News
Jawaab ku Saabsan Qoraal ku Soo Baxay Bogga Beenta ee Qorahey.com
Jan 23, 2011 Eritrea, ethiopia, Jawaab ku Saabsan Qoraal ku Soo Baxay Bogga Beenta ee Qorahey.com, Jwxo-shiil, ogaden peace, onlf peace
Waxaa Qoraal dheer na soo gaadhsiiyey akhriste ka mid ah macaamiisha bogga rasaasa.com, oo ka jawaabaya qoraal. Qoraalkan oo daba socda burinayana qoraal ay qortay Qorahey.com, oo iyadu wax u qorta Janan Jwxo-shiil. Shabkadan oo qorta qoraalo been ah oo la abuuro, ayaa aad uga cadhaysiisay akhristaha. Waxaana uu akhristuhu faahfaahinayaa sida ay u shaqayso shabkadani.
Qoraalka ayaa sidan u qoran: Jawaab ku saabsan Qoraal ku soo baxay bogga Beenta ee Qorahey.com, Jan 22, 2011 oo uu ciwaankiisu ahaa [Dacwad ka dhan ah gacan yareyaasha gumaysiga oo wadanka Maraykanka ay ka fureen dad uga hawlgala Jabhada magaalada Washington DC iyo Minneasota oo bilaabatay].
Hadaba aniga oo ah Abdulkadir kuna hadlaya Magaca jaaliyada Ismaamulka Somalida Ethiopia, waxaan canbaaraynaynaa Qoraalkaas laggaga Been Abuuranayo Cabdirahmaan iyo Bashiir oo ah masuuliyiin sharaf badan ku dhex leh Jaaliyada isuna taagay waxqabadka dalkooda iyo dadkooda.
Qoraalkan laggaga been sheegayo laba muwaadin ee u dhalatay Ismaamulka Somalida Ethiopia, waxaa qoray Wiil reer Dhagaxbuur ah oo magaciisa la Yidhaahdo CABDIQANI oo Ay Dhashay islaan la Yidhaahdo FAADUMO XASAN, waxayna Xaga hooya walaalo ka yihiin Nabadiidada caan ka ah ROODa AFJANO [AF-CADAAB], Waxayna isaga iyo hooyadii degan yihiin Xaafada CEDAR ee magaalada Minneapolis ee dalka maraykanka.
Cabdiqani oo uu seedi u yahay ninka iska leh bogga QORAHAY.COM, ayaa caadaystay in uu been joogta ah ka qoro Jaaliyada Ismaamulka Somalida Ethiopia ee minnasota. Cabdiqani waa nin maskaxda wax uga dhiman yihiin oo lacagta dadka xanuunsan la siiyo lagu qaato, taas oo ah in lahayo 8 saac maalin walba.
Arintaas oo been ah dawladuna ayna ka warhaynin, ninka tuugadaas samaynaya oo aan waxba ka xishoonaynin weeye ninka ku been abuuranaya masuuliyiinta Jaaliyada, aflagaadaynayana M/weynaha DDS.
Waxaa dhab ah in dadka u shaqeeya kooxda Jwxo-shiil, ay kuligoodba yihiin dad noocaas oo [Fadhi ku Dharag ah], rabana fadhi ku dhagarnimadaas in ay ku waxyeeleeyaan dadweynaha Somalida Itobiya oo dal iyo dibadba diyaar u ah in ay dadkooda iyo dalkooda wax u qabtaan.
Bariba Waan Fakan ee Maxaa la Iggaga Farxi
Madaxweynaha Dawlad Degaanka Somalida oo Wacdaro ka Dhigay Waqooyiga Maraykanka